MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYGA KOOLLEE EE AUSTRALIA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyga Koollee ee Australia
Lahaanshaha sawirka Toolalla Koolies
Mar bay ahayd wax caadi ah in Koolies ay yeeshaan hal ama laba indho buluug ah , laakiin tan iyo markii daahfurka DNA ee indhaha buluugga ah ee Koolie ku xiraya hiddo-wadaha 'merle gen', kaas oo abuuraya indhoole / dhago-nugul, hab-dhaqanno taran badbaado leh oo hagaagsan oo leh ku-biirinta dhiirrigelinta ee isku-dhafka adag ee caafimaadka taranka iyo muuqaalka. Waxaan aragnay hoos u dhac ku yimid Kooliyada indhaha buluugga ah. Midabka indhaha ee caadiga ah maanta waa indho bunni ah oo casaan ah iyo indho bunni ama indho madow ah oo loogu talagalay dadka madow, iyo codadka labadan midab ee aasaasiga ah, mararka qaarkood wali waad heli kartaa indho (yada) buluug ah, ama qayb ka mid ah, sida jajabyada, bilaha xitaa kalabar laakiin waa mar dambe caadi ma aha. Midabada Australiya Koolie waxay noqon kartaa midab casaan ama buluug ah (qaabaysan) adag (hal midab) casaan / shukulaato ama madow bi (laba midab) casaan iyo caddaan, madow iyo caddaan, madow iyo madow, midab casaan iyo midab leh (saddex midab) oo ay ku jiraan meeriska, caadi ahaan leh dhibco tan iyo barta cad ee xabadka. Dhererka koofiyaddu waxay ku yimaadaan siman, gaagaaban, qallafsan oo gaaban, dhexdhexaad ah, laba jibbaaran ama hal keli ah, oo baalashooda lugaha ku leeyihiin ama aan lahayn jaakado dhaadheer ma aha wax caadi ah.
Koolie waa midka ugu horreeya uguna horreeya ee nooc shaqo ah, oo loogu talagalay adkeysi, adkeysi iyo in la dalbado. Sida dhammaan noocyada shaqeeya Koolies dabeecadda dabiiciga ahi waa inay raacdo wax kasta oo dhaqaaqa, tan waxaa ka mid ah idaha, lo'da, riyaha, fardo, gisi iyo digaag. Koolies waxaa loo yaqaanaa inay dabiici ahaan dib udhacaan (gadaal uga boodaan) idaha iyo sidoo kale lo'da. Maanta waxaan aragnaa waajibaadka shaqo ee soo jireenka ah ee Koolie oo la ballaariyay oo ay ku jiraan adeegga, isboortiga iyo wehelnimada aadanaha, Koolies guud ahaan maahan eeyaha-gardarrada ah waxayna u dulqaataan noocyada kale marka lagu soo bandhigo da 'yar ama ay wax ka qabtaan milkiilayaasha khibrada leh, Koolies waxaa loogu talagalay dhalinyarada, laakiin marwalba waxaa jira waxyaabo ka reeban sharciga, waligaa ha uga tagin ilmo yar oo aan ilaalin eeyga. Kooliyada Australiyaanka ah waxaa laga shaqeyn jiray keydka Australia ilaa horaantii 1800s. Si loola socdo dalabaadka cunsuriga iyo kaydleyda Koolie wuxuu u baahday inuu yeesho adkeyn muddo 14 saacadood ah, awood u leh inuu uga gudbo nooc shaqo nooc kale, ha ahaato inuu xoolo ku kaxaysanayo masaafada dheer, adhiga oo taageeraya tartanka. , ama ku dhajinta 10,000 madax gaari xamuul ah, Koolie waa inuu wada sameeyo. Laqabsashadeeda ayaa u ogolaatay inay ahaato mid deggan oo deggan hareeraha idaha iyo wankaba wali waxay taqaanaa goorta xoog la adeegsanayo, iyadoo leh jilif ama qaniinyada xoqida iyo dibida jilicsan iyo isteerinka, cimilada ama wanka. Koolie wuxuu u baahday inuu ahaado mid dhaqso badan oo dhaqso badan, awood u leh inuu boodo, ka leexdo, ka tartamo, qabto, xannibo oo kaxeeyo oo uu si fiican u sameeyo, Koolie-na wuxuu daboolay baahiyahan isla markaana wuxuu sii wadaa inuu buuxiyo baahida ay u hayaan. Dhammaan ardayda Koolie kuma dhasheen dabeecadaha dabiiciga ah ee xoog leh ee shaqaalaha waxayna ardaydan kufiican yihiin Adeegga sida gargaarka bini'aadamka, SAR, Digniinta iyo eeyaha ogaanshaha bambaanooyinka iyo sidoo kale Ciyaaraha sida firfircoonaanta, dulqaadka, utility iyo daba galka, shaqo la'aanta Koolies wali waxay hayaan adkeysigii, karti iyo firfircoonidii, Kooliyaal badan ayaa soo daahay ubaxleyda, iyagoo soo bandhigaya dareenkooda dabiiciga ah ugu dambeyn labo sano jir. Noocani waa inuu lahaadaa kicinta maskaxda, waligiis kuma fiicnaan doono daarad yar oo aan lahayn wax la qabto. Laguguma talin inaad ka iibsato Koolie qof kasta oo aan ka ahayn xirfadle diiwaangashan oo leh khibrad, faham iyo danaha ugu wanaagsan ee nooca, kaas oo kaa caawin doona xulashada koolie ugu fiican milkiilaha saxda ah, hubi in dhammaan baahiyaha caafimaad la daboolay, waraaqaha oo dhami waa run oo waa sax oo yaa ku siin doona taageero iyo hagitaan iibka ka dib iyo haddii loo baahdo dib ula soo xiriir khadkooda dhiiga ama ka caawiya dib u habeynta. Halkan waxaa ku yaal natiijooyin celcelis yar oo ka soo baxa iibsi indho la'aan / indhoole ah, oo ay bixiso Koolie Rescue oo sawir fiican ka bixinaya dhibaatooyinka dhici kara iyo kuwa dhici kara. Haweeney ayaa u maleynaysay inay sameyneyso ficil wanaagsan markii si niyad ah ay gabar yar oo Koolie ah uga iibsatay nin beeraley ah oo ay booqanaysay, cunuggu wuxuu ahaa mid sharaf leh, oo dixirigoodu ka buuxo waxayna umuuqdeen inay u baahan tahay quudin wanaagsan, hooyadeed ayaa dib loogu celiyey shaqada. oo cunuggu wuxuu jiray shan toddobaad oo keliya, waxay dareentay inay hubto in cunuggu dhinto haddii laga tago. Tani waa sida ay u shaqeeyaan kuwa macaash doonka ah iyo beeraleyda yar yar sida dadweynaha guud inay u fikiraan, heshiiska naxariista, marwalba way shaqeeyaan. Halkii ay u rogi laheyd beeraleyda hoyga maxaliga ah isla markaana ay joojin laheyd dhaqankiisa naxariis darada ah, waxay iibsatay cunugga, kaliya inay ku wareejiso badbaadinta Koolie lix bilood kadib, maxaa yeelay cunuga yar ee qurxoon dharkiisa ayuu ka jeexjeexay qadka, wuxuu qoday beer kasta waxay waligeed beeratay, saxarootay oo qoysay halka ay waligeed ka hesho oo ay isku koobto carruurta xaafadda ka dib markii ay dallacday deyrarkooda. Gurmadka ayaa dhabarka u saaray beer ay ka baratay ka shaqeynta keydka. Nin dhalinyaro ah ayaa arkay oo iibsaday cufan quruxsan, indho buluug ah, oo u badan Koolie cup oo ka yimid dukaan xayawaanka lagu iibiyo, (wuxuu ka helayaa macluumaadka nil milkiilaha dukaanka), gacalisadiisa maalinta Jacaylka ayay jacayl u qabatay xilligii uu u soo bandhigay. pup, markii hore waligood ma arkin in ardaygu uusan ku boodin dhawaq lama filaan ah ama duufaanka, ma ciyi jirin marka eeyga albaabka xiga uu kor u kaco, madaxiisa ma jeedin markii ay qolka galaan, qiyaastii laba iyo toban toddobaad jir Lamaanahu waxay ogaadeen inuusan waligiis imaanin markay wacaan laakiin had iyo jeer wuu yimaadaa markuu arko, ka dibna ugu dambayntii isagoo suxuunta samaynaya hal habeen ayaa qaar la tuuray oo la burburiyey, eeyga ayaa sii waday inuu cuno lafihiisa dhabarkiisa jikada, wayna xaqiiqsadeen xirmo gaar ah oo farxad ayaa dhago la '. Markii lala xiriiray Koolie Rescue waxay awood u yeesheen in la taageero oo ay helaan caawinaad xagga tababbarka dhagoolahooda Koolie waligoodna kama qoomameynin helitaankiisa, hadda waa shan jir. Dhacdooyinkani waa wax caadi u ah Koolie oo keliya laakiin dhammaan noocyada, Badbaadinta Koolie waxay ku dhowdahay lix bilood illaa laba sano jir, waxay ka gudbeen marxaladda quruxda badan waxayna u galeen hagitaan, taageero, waxay i siiyaan marxalad shaqo oo u baahan mas'uuliyad badan laakiin si weyn abaalmarino aanad waligaa qiyaasi karin ama kuwa ka daa'imay waxtarkoodii oo aad u da 'weynaaday si ay u daboolaan baahiyaha ka shaqeeya iyo kuwa naafada ah. La xiriirida sarkaalka eeyaha waa tallaabada ugu horreysa, ee ah qaabka ugu amniga iyo badbaadada badan ee baaritaanka. Had iyo jeer noqo eeygaaga mid adag, laakiin deggan, hoggaamiye xirmo joogto ah . Ku habboon canine ilaa isgaarsiinta aadanaha waa lagama maarmaan.
Dhererka: 13 - 23 inji (34 - 60 cm)
Miisaanka: 33 - 53 rodol (15 - 24 kg)
Hidda-wadaha meerisku wuxuu keenaa indhoole iyo ama dhagoolayaal dhagoole taranka isku darsamida adag si loo joojiyo dhacdadan ayaa si weyn loo dhiirrigaliyay. Koolies-ka ayaa mararka qaarkood la kulmi kara dhibaatooyin wada jir ah sababtoo ah jimicsi xad-dhaaf ah, haddii ay sameeyaan boodbooyin badan / qalloocinta iyo ka-leexinta ama ka dib Frisbees iyo kubbadaha waxay dhaawici karaan carjawda iyo seedaha, gaar ahaan markay sii weynaadaan. Qaarkood waxay u nugul yihiin xasaasiyadaha yar-yar ee maqaarka ama arrimaha nidaamka difaaca iyo kiimikooyinka sida isku-soo-uruurinta ama doogga kale iyo xaaladaha dhifka ah ee aadka u daran waxay la kulmi karaan sunta sunta ah ee ku sii kordheysa darnaanta haddii aan la daaweyn waxayna sababi kartaa ugu dambeyn dhimasho, xaaladdan waxay ku dhacdaa noocyo badan kuma koobna oo keliya nooca Koolie, tirooyinka kiisaska la duubay way yaraayeen, iyo iyadoo si taxaddar leh loo tarmay Koolie isku dheelitiran oo taranka diiradda la saari karin, iyadoo qiimaha mid ka mid ah awoodda laga sarraysiiyo mid kale, sida midabka, nooca ama astaamaha Koolie wuxuu sii ahaan doonaa mid xor ka ah cudurka hidda-socodka mustaqbalka. Koolies hadda waxay leeyihiin kala duwanaanta hidde-sidaha DNA ee adduunka.
Koolie-ka Australiyaanka ah looma jeedin nolol go'doon ah. Waa mid dhex dhexaad firfircoon oo ugu fiican ku samayn doonta ugu yaraan deyr weyn oo ugu habboon dadka ka shaqeeya guryaha, ama awood u leh inay Koolie u qaataan si ay ula shaqeeyaan, qoysaska ama lammaanaha qof guriga jooga inta badan.
Eygan firfircoon ee firfircoon wuxuu u baahan yahay shaqo, oo ay ku jiraan jimicsi joogto ah si uu muuqaal ahaan ugu ekaado, jir ahaan iyo maskax ahaanba. Hadday shaqadani tahay dhulka shaqada, adeegga caawinta aadanaha, tartamada isboortiga ama wehelkaaga waa inay ogaataa in loo baahan yahay, maamulayaashu waa inay u maraan taageero, hagitaan, dulqaad, iyo jacayl u wada shaqeyn ahaan shuraako, dhiirrigeli oo joogto noqo. Waxa aad tahay ilaaliye ahaan Koolie-gaaga ayaa ka tarjumi doona sida ay ula socoto hoggaankaaga. Marka aadan shaqeynin, sida eeyaha oo dhan waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta, dheer socod ama orod. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Noocani ma farxi doono inuu jiifo guriga oo dhan maalintii oo dhan. Tani waa eey aad u baahan tahay inaad jadwal u sameyso fadhiyo jimicsi oo wanaagsan maalin kasta, ama aad shaqo u hayso inay qabato.
Celceliska da'da waa 18 + sano
Qiyaastii 4 ilaa 6 eey
Koodhku waa fududahay in la xajiyo oo wuxuu u baahan yahay fiiro yar. Ku caday marmar burush adag oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
Dhammaan noocyadu waxay ka bilaabmeen qaar badan oo Australian Koolie ah kama duwana. Buugaagta taariikhdu waxay muujinayaan in soo dejinta halista ah ee noocyada shaqeeya ay bilaabmeen 1800-yadii buugaag badan oo ku saabsan Kelpie, Australian Cattle Dog iyo Stumpy oo tixraacaya saamaynta Merle ee aasaaska asalkooda. Mid ka mid ah buugga noocaas ah, oo ay qortay Angela Sanderson oo loo yaqaan 'Dogs Australian,' 1985 oo ay daabacday Currawong Press waxaa loola jeedaa Australian Koolie, oo markaa loo yaqaan Jarmalka Collie. Waxa ugu cajaa'ibka badan buugeeda ayaa ah tixraaceeda gaarka ah ee qoraa hore oo Jarmal ah Von Stephanitz iyo buugiisa 'The German Shepherd In Word and Picture' oo la sii daayay 1925, kaas oo uu ku qoray, 'The Grazier Australian waxay si ku filan ula dhacday eyda adhiga ah ee Jarmalka in la soo dhoofiyo. ” Qoraalladiisa wuxuu u jeedaa eeyaha lagu arkay Tiger ee Bartamaha iyo Waqooyiga Jarmalka, oo ka kala yimid Saxony iyo Brunswick wuxuuna ku sifeeyaa sida Quote: “Eeyahaani waxay lahaayeen bunni madow ilaa baro madow ama buufisyo, ama buuqyo waaweyn oo ku yaal aag fudud, ama, kaas oo ahaa loo tixgeliyaa aristocratic ka badan, qalinka cawl ee cirridka madow '. Dhamaadka Oraahda “markii la soo bandhigo sawirka Tiger Jarmal ah ma adka in la arko halka Koolie-keena hadda ka soo jeedo. Waxaa jira xusid ah Elizabeth Macarthurs ', (afada John Macarthur oo ka furatay meherada Merino Australia,) gaadiid adhi reer Jarmal ah oo magaceeda la yiraahdo Joseph Pabts oo la geeyay gurigeeda oo ku yaal Camden, New South Wales sanadkii 1825 si loo ilaaliyo adhigeeda 100 sano kahor, Joseph wuxuu yimid isaga iyo qoyskiisa iyo tiro eeyo ey Jarmal ah oo shaqeeya ah, oo la rumaysan yahay inay yihiin Tigers. Tani waxay umuuqataa inay muujineyso in Tigers ay joogi laheyd Australia 11 sano kahoreysa imaatinkoodii uguhoreeyay ee rasmi ahaan lawareegay ee deganayaal Jarmal ah ilaa iyo qarniyaal kahor Von Stephanitz. Mudane Kirchner wuxuu soo dhoofiyay dhowr Jarmal ah oo yimid markabkii Beulah kaasoo ku xirtay wareegga wareegga 5-tii Abriil 1849 si ay u noqdaan beero-cowsyo iyo adhijirro. Tigers-kii hore waxay ku milmi lahaayeen khadadka kale ee dhiigga ee waagaas, ka dib markii ay bilaabeen inay yimaadaan Kalluun madow iyo midab buluug ah oo laga keenay Iskotland oo laga soo dhoofiyay Thomas Hall iyo isku-darka hufan ee isku-duuban ee ka imanaya Ingiriiska ee ay soo dejiyeen Chris Howe ee reer Victoria iyo qoyska Boqortooyada NSW dhammaantood waxay ku lahaan lahaayeen saamaynta ay ku leeyihiin, laakiin waxay kaga duwan yihiin ilmaadeeradooda Kelpie iyo heeler-ka Australian Koolie weli wali si aad ah looma taabto ama waa la isku daraa heerarka waana uu la mid yahay sidii uu ahaan jiray in ka badan 160 sano. Inbadan oo ku saabsan Koolie
Shaqaynta, Daaweynta, Ciyaaraha
ANKC = Golaha National Kennel Council
ASAP = Cudurka Dabeecadda Xoolaha ee Australia
ASCA = Golaha Shepherd ee Australia
KCA = Koolie Club ee Australia
NZCCC = Golaha Xakamaynta Kansarka New Zealand
TWBF = Noocyada Dhaqanka ee Shaqada ah ee Finland
VGAP = Barnaamijka Hubinta Genetics ee Caafimaadka xoolaha
Australian Koolie — Waxaa rinjireeyay fanaanada Barbara Keith
Australian Koolie Tjukurpa Fursad u soo hoynaysa guryahooda — Sawir Waxaa iska leh Koolie Club ee Australia
Eeg tusaalooyin badan oo Koolie ah
Sawirada Koolie 1
Sawirada Koolie 2
Xaqiiqooyinka Koolie ee loogu talagalay kuwa kaliya u baahan inay ogaadaan
cad cad oo leh dhibco bunni ah
sawirada eeyaha spaniel guga
isku dhafka sternard iyo adhijir
dachshund dheer lehba iyo isku dhafka chihuahua
eyga lo'da iyo qaska loo yaqaan 'pitbull'
galbeedka Highland sawiro cabsi leh